Ukufaka i-boron nitride deramide raramics ityhubhu ye-molten yentsimbi
I-Boron Nitrride ityhubhu ye-cebe ye-rod, ebizwa ngokuba yigrafu emhlophe, inolwakhiwo olufanayo negrafu. Inobuqili oluhle lombane, ukuqhubela phambili kobushushu, ukuxhathisa okuqinisekileyo kwengozi kunye nokuzinza kwemichiza.
Hot icinezelwe Iboron ephuculweyo Iboron ephuculweyo zingasetyenziswa ukwenza crucibles ngenxa ndiyabanyibilikisa semiconductors kunye neenkonkxa-lobushushu eliphezulu yokunyibilikisa isinyithi, semiconductor ubushushu-enyamalala iinxalenye yokugquma, iibheringi-amaqondo obushushu aphezulu, thermowells, kunye ngumngundo zeglasi-bokwakha.
Kuyinto uhlobo elitsha eliphezulu lobushushu-enganyangekiyo super-hard izinto ezisetyenziswayo ukwenza ngokumba amasuntswana, izixhobo esirhabaxa, kunye nezixhobo ahlabayo.
ukugcina ubushushu Excellent zombane kunye thermal conductivity kwenza BN luncedo kakhulu njengoko isinki ubushushu aphezulu-ngamandla izicelo elektroniki. iimpawu zayo thelekisa kakuhle kunye beryllium oxide, aluminiyam oxide, kunye nezinye izinto zokubopha elektroniki, kwaye lula machinable ukuba iimilo ezinqwenelekayo kunye nobukhulu.
Indawo Ubushushu High
uzinzo Ubushushu kunye nokumelana elihle thermal shoka zenza BN izinto efanelekileyo okungqongileyo enzima eliphezulu lobushushu ezifana nezixhobo plasma arc welding, kwe- mthombo ezisicaba, kunye nezixhobo crystal nokukhula semiconductor& processing.
Ezibunjiweyo Metal nokusingatha
BN na ezingaphiliyo, egalelwe, nonreactive idibene neetyuwa halide kunye nezinto zokwenza ngokutsha, kwaye akukho manzi luninzi izinyithi etyhidiweyo kunye slags. Ezi mpawu, zidibene ukwandiswa thermal ephantsi, yenza kube abalungele izinto interface esetyenziswa kwiinkqubo ezahlukeneyo etyhidiweyo.
Boron ephuculweyo Ceramics intonga tube
Hot ohlohliweyo Sintering kunye Chemical nomphunga komhlaba
ezinamacala Iboron ephuculweyo yodongwe
babelawula abaninzi, ixesha lonikezelo ngeenxa 10-20days. ngolwandle okanye ngomoya njengokucela umthengi
ekwakheni ubuhlobo bokwakha
Boron oxide electronic
Igumbi Ubushushu Electric Resistivity (Ω · cm)
Max Ukusebenzisa ngamaqondo obushushu (℃)
Ngo Akusebenzi Gas
Xa Umshini High (Long Time)
Three-Point Ukugoba Strength (MPA)
Thermal Ukwandiswa Coefficient (20-1000 ℃) (10-6 / K)
Ubushushu High Furance
Ubushushu High Electrical Aasa Components (Ubushushu High yokwambathisa sleeve Tube njl)
Metal aphele Iziko
Kwisikhongozeli Of Metal okanye Glass Ingxubevange
Ukulahlwa zomngundo Components Of The Precious Metal And Special ingxubevange.
Ubushushu High Support Part
Amanzi esatsiba Kwaye Tube Uthutho Of The onyibilikayo Metal
amakhonkco Break ekubunjweni steel othe tye
Feedthroughs for izixhobo aphezulu ombane
izikhephe Evaporator for aluminium metallization
Nemilomo elinamatye nonferrous
Amacandelo semiconductor lemveliso
Crucibles ekukhuleni crystal
Nokuhanjiswa umthombo nezonkana ezisicaba
Insulators e PVD / Zemithambo vacuum coating egumbini
hlangana jigs Electronic ingxenye
izakhi electronic & substrates
Spacers for inyibilika zeglasi kunye nonferrous